एसएलसीपछि नै प्राविधिकतर्फ लागेकोमा दंग छु - Naya Patrika
एसएलसीपछि नै प्राविधिकतर्फ लागेकोमा दंग छु
नयाँ पत्रिका | असार २५, २०७४
डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा
प्राविधिक शिक्षाको महत्व नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर छ । प्राविधिक शिक्षा भन्नेबित्तिकै जीविकोपार्जन, व्यवसायसँग जोडिएको हुन्छ । नेपालमा जसरी प्राविधिक शिक्षालाई जीविकोपार्जन शिक्षासँग जोडेर लैजानुपथ्र्यो, त्यसरी लैजान सकिएको छैन । प्राविधिक शिक्षालाई हाम्रो जीवन अगाडि बढाउने शिक्षाका रूपमा तल्लो तहदेखि नै लैजानुपथ्र्यो ।
नेपालमा धेरै ठूलो रकम गैरप्राविधिक शिक्षामा खर्च भइरहेको छ । तर, त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । बाहिरी देशमा माध्यमिक तहबाटै प्राविधिक विषय छनोट गरी जागिर खान सुरु गरिन्छ । त्यसैबाट जीवन चलिरहेको हुन्छ । २०–२५ वर्षको भएपछि त्यही क्षेत्रको ‘हाई लेभल प्रोफाइल’को काम गर्छन् । विदेशमा यो लेभलमा धेरै खर्च छ । हामीले व्यावहारिक शिक्षा भनिरहेका छौँ, वामपन्थीले जनवादी शिक्षा भन्ने गर्छन्, त्यो भनेको प्राविधिक शिक्षा नै हो ।
एउटा व्यक्तिलाई जीविकोपार्जन गराउने शिक्षा प्राविधिक शिक्षा हो । ठूलो जमातलाई जीविकोपार्जन गराउने शिक्षा आजको आवश्यकता हो ।
आज ओभरसियर, एचए, पर्यटन जे पढे पनि सीप सिकेर काम गर्छ । र, पछि उसले पिएचडी पनि गर्न सक्छ । अहिले निजीकरणका नाममा प्राविधिक शिक्षा महँगो भएको छ । जसलाई प्राविधिक शिक्षा चाहिएको छ, त्यो वर्गले गरिबीका कारण अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्था छ । जसलाई चाहिएको छैन, जसले प्राविधिक शिक्षा लिएर तल्लो स्तरको कामै गर्दैन, त्यो वर्गले पढेर काम छैन । जस्तोः हामीले स्टाफ नर्स उत्पादन गरिरहेका छौँ । चार–पाँच लाख रुपैयाँ तिरेर स्टाफ नर्स पढ्नेहरू त्यसमा काम नै गर्दैनन् । हामीले पढाएका स्टार्फ नर्स धेरै जसो अस्ट्रेलियाका कामदार भएका छन् । हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले अस्ट्रेलियाका लागि नर्स पढाउने हो ? प्राविधिक शिक्षालाई जसरी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकिएको छैन ।
योजना निर्माणमा केन्द्रित आयोग
राष्ट्रिय योजना आयोगले कति जनशक्त आवश्यक छ भनेर प्रक्षेपण गर्नैपर्छ । त्योअनुसारको जनशक्ति उत्पादनका लागि योजना बनाउनुपर्छ । यो काम गर्न आवश्यक छ वा छैन भन्ने प्रश्नै हुँदैन, योजना आयोगमा बस्नेले कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने योजना बनाउनैपर्छ । त्यसका लागि योग्य व्यक्ति आयोगमा पुग्नुपर्छ । हामीलाई प्रतिव्यक्ति आय बढाएर १ हजार डलर बनाउनुपरेमा कति हाइड्रो बनाउने, बाटो कति बनाउने, खानेपानी कसरी पुर्‍याउने, शिक्षामा कति लगानी गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ । त्यो काम गर्न कति जनशक्ति आवश्यक छ भनेर योजना आयोगले प्रक्षेपण गर्नुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताले पनि योजना आयोगले चाहेजस्तो काम गर्न सकेको छैन । योजना आयोगले वार्षिक, तीनवर्षे वा कति वर्षे योजना बनाउनुपर्ने हो, त्यो बनाएपछि कति डाक्टर, कति इन्जिनियर, कति सोसल साइन्सको जनशक्ति चाहिन्छ, त्यति नै उत्पादन गर्नुपर्छ । यो मुलुकमा सोसल साइन्सको पनि उत्तिकै महत्व छ । अर्थशास्त्र, जनसंख्याको पनि महत्व छ । हामीले प्राविधिक शिक्षा मात्रै भनेर साँघुरो बनाउन हुँदैन । प्राविधिक ‘माइन्ड सेटअप’ ले सबै विधामैत्री बनाउनुपर्छ ।
एसएलसीपछि प्राविधिक शिक्षाको यात्रा
मैले एसएलसीपछि प्राविधिक शिक्षा लिएको हुँ । एसएलसीपछि ओभरसियर पढेको हुँ । ओभरसियर पढेर मैले तीन वर्ष काम गरेँ । तीन वर्ष काम गरेर फेरि चार वर्ष बिई पढेँ । बिई पढेपछि फेरि तीन वर्ष काम गरेर एमई गरेँ । एमई गरेको चार वर्षमा पिएचडी गरेँ । त्यतिवेला एचए पढेका साथीहरू डाक्टर बनेका छन् । पहिले एचए पढेकाहरू विज्ञताका हिसाबले धेरै माथि पुग्नुभएको छ । डा. भगवान् कोइरालाले एचए पढ्नुभएको हो । ओभरसियर पढेका धेरै माथि पुगेका छन् । तर, हाम्रो संस्कार प्राविधिक शिक्षा पढ्ने गरिबका छोराछोरी र कमजोरले हो भन्ने गलत मानसिकता रहेको छ । यो सोचाइले गरिब, मध्यम वर्ग माथि आउँदैन । २०४० को दशकभन्दा पनि हाम्रो अहिलेको संस्कार व्यवसायीकरण र निजीकरणका नाममा प्राविधिक शिक्षा उपेक्षित भइरहेको छ ।
एसएलसीपछि प्राविधिक शिक्षामा लागेकोमा म एकदमै सन्तुष्ट छु । म दंग छु । हिजो ओभरसियर पढेर २०३७÷०३८ सालमा डडेल्धुरामा काम गरेको अनुभव लिएँ । म १८–१९ वर्षको व्यक्तिजसरी खटेर काम गरेको थिएँ, खुसी छ ।
अहिले क्यानडा, अमेरिकालगायत देशबाट नेपालमा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्न पठाइएको हुन्छ । उनीहरूलाई दुःखमा मानिस कसरी बस्छन् भनेर सिक्न पठाएको हो । तल्लो तहबाटै प्राविधिक शिक्षा लिँदा बढी अनुभवी र व्यावहारिक भइन्छ । एउटा प्रशासनिक क्षेत्रमा सुब्बाबाट काम गरेको व्यक्ति सचिव हुँदा जति परिपक्व र व्यावहारिक हुन्छ प्राविधिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हुन्छ । सुब्बाबाट अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव भएर धेरै अनुभव बटुलेका कारण व्यावहारिक हुन्छ । म पनि ओभरसियरबाट काम सुरु गरेकाले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ ।